एम्बुलेन्सको नमिठो साइरन… आन्दोलित रिपोर्टरको डायरी | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
एम्बुलेन्सको नमिठो साइरन… आन्दोलित रिपोर्टरको डायरी
| 192 Views | Published Date : 20th January 2018 |
नवीन अभिलाषी तिखा आँखा र टाठा कान भएका मानिसहरुको खाल बनेको छ तुलसीपुर चौक । बिहान ८ वजे होस् या दिउँसो १२ वजे । बेलुकी ५ वजे नै किन नहोस् । मानिसहरुको भिडभाड र राजनीतिक गफगाफ झन्–झन् गरामागरम बनेको छ । र त्यति नै बेला आइपुग्छ एम्बुलेन्स र बजाई जान्छ साइरन ।
दिउँसो एक हुल मानिसहरु जस्लाई आँखाले भ्याउन सकिदैन हेरेर, चर्को चर्को नारा र उत्तेजित बन्दै आइपुग्छ तुलसीपुर चौकमा । कहिले दामोदर चोकतिरबाट, कहिले ट्राफिक चोकतिरबाट, त कहिले दीपशिखा रोडतिरबाट हान्निदै आएको आन्दोलित जुलुस ठप्प रोकिन्छ र चौकको बीचमा पर्ने पिलरमा घेरिएर भरिभराउ हुन्छन् मानिसहरु । चौकमा अटाई नअटाई बसेका मानिसहरुलाई छिचोल्दै आइपुग्छ फेरि एम्बुलेन्स । र साइरन बजाएर भिड छिचोल्दै हुँइकिन्छ ।
घोराही दैनिक दुई हजार भन्दा बढि सवारी साधनहरु सञ्चालन हुने बजार हो । करिब छ हजार मानिसहरुको बजार घोराहीमा ४ दिनदेखि सन्नाटा सिवाय केहि छैन । सुनिन्छ त केबल एम्बुलेन्सको साइरन मात्र । भोकप्यासले प्याक प्याक भएको २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको झझल्को आइरहेछ ४ दिनदेखि ।
सरकारले बुटवलमा अस्थायी राजधानीको मुकाम तोक्दैछ भन्ने सुईको पाएपछि एक घण्टा चक्काजाम गर्न निक्किएका दङालीहरुले बुधबार बेलुकी नै अनिश्चितकालिन हड्तालको घोषणा गरे । जुन आन्दोलन सरकारी कार्यालय ‘कब्जा’ गर्नसम्म पुगेको छ । दाङका दुई आधार भनिएका कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोख्रेलदेखि पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनसम्मका मानिसहरु दाङ राजधानी तोकिनेमा ढुक्क थिए । तर, शेरबहादुर देउवाले बाजी उल्टाए ।
तर, यो बाजीलाई प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सुशील गौतमले टिके निर्णय भनेका छन् । सरकारलाई भएको बैधानिक अधिकारलाई लोकतन्त्रमा तथ्य, आधार औचित्य पुष्टि नगरी निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘बैधानिक सरकारलाई अधिकार छ भन्दैमा पारदर्शी रूपमा तथ्य, आधार र औचित्य पुष्टि नगरी लोकतन्त्रमा टिके निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ सामाजिक संजालमा गौतमले लेखेका छन््, ‘देशमा आगो लागिरहेको बेला यो यो आधारमा अस्थायी मुकाम तोकियो भनेर तार्किक रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत हुने जिम्मेबारी खै पुरा गरेको ? किन ती–ती ठाउँमा के आधार मापदन्डमा तोकियो जान्न पाउने अर्थात् थाहा को अधिकार जनताको अधिकार हो ।’
नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काले सरकारको यो निर्णय अन्यायपूर्ण भने । तुलसीपुर चोकको सभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्र्दै दाङसहित प्रदेशको पश्चिम भुगोललाई अन्याय गर्दै सरकारले निर्णय गरेको उनको तर्क थियो । भुगोलको दृष्टिकोणले हेर्दा बुटवल राजधानी भए स्वभाविक रुपमा अन्याय देखिन्छ । किनकि बटवल प्रदेश न. ५ को पूर्वी छेउमा छ ।
पश्चिम छेउ बर्दियाबाट बुटवल आउन करिब २ सय ८० किमिको दुरी पार गर्नुपर्छ । त्यस्तै बाँकेबाट करिब २२५ किमि, दाङबाट १७५ किमि, रोल्पाबाट २०० किमि, प्युठानबाट १५० किमि र पूर्वी रुकुमबाट करिव ३२५ किमि पार गर्नुपर्छ । बुटवलको विकल्पमा दाङ राजधानी भएमा दाङ पुग्नलाई केही लामो दुरी पार गर्नुपर्ने २ जिल्ला मात्र छन् । ती हुन् नवलपरासी र रुपन्देही । तर, बुटवल राजधानी हुँदा ६ वटा जिल्लालाई बुटवल टाढा पर्दछ ।
तर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा दाङमाथीको आरोप पोखिएको छ । प्रदेशको सिमांकन निर्धारणको समयमा साविक राप्ती अञ्चलबाट रुकुम दुई टुक्रा हुँदा र सिंगो सल्यान प्रदेश नं. ६ को पोल्टामा जाँदा दाङ चुप बसेको आरोप छ । जस्का कारण रोल्पा, प्युठान र रुकुमले खुलेर नबोलेको पाइएको छ । तर, २०७२ साल साउन २७ गते सल्यान विछोड हुनुको पीडामा आन्दोलन गर्दै गर्दा दाङ पनि आन्दोलित थियो । अखण्ड राप्ती हुनुपर्ने माग राखेर गरिएको आन्दोलनको साक्षी अहिले पनि ईन्टरनेटहरुमा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सहईञ्चार्ज निर्मल आचार्यले अखण्ड राप्तीको मुद्धासहित घोराहीमा गरेको आन्दोलन स्मरण गर्छन् । ‘केन्द्रिय नेतृत्वबाट हुने निर्णयलाई तुहाउन हामीले दाङबाट नसके पनि राप्तीका सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरुसँगको निर्णय पछि हामी आन्दोलन गरेकै हो’, आचार्य भन्छन, ‘त्यो आन्दोलनसँग यो आन्दोलनको कुनै पनि सम्बन्ध छैन । रुकुम र सल्यान हामीसँग भैदिएको दाङ सेन्टर पर्छ भन्ने थियो । सेन्टर त अहिले पनि छ ।’
निर्णयपश्चात् दाङका पत्रकारहरु बीचमै ‘स्टाटस युद्ध’ भयो । काँग्रेस समर्थन गर्ने पत्रकारहरुले बाम गठबन्धन त्यसमा पनि कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोख्रेललाई गाली गरे भने बामगठबन्धन समर्थित पत्रकार नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवा बिरुद्ध खनिए । तर, यस्तो बेलामा प्रेस जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्छ भन्छन् प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी गौतम । ‘न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने प्रेस अनावश्यक पक्षधरता हुन आवश्यक छैन’, टेलिफोनमा गौतमले भने, ‘अहिले प्रेस उत्ताउलो भएको छ । प्रेस बैचारिक र बौद्धिक मानिसको समूहको । न्यायोचितको आधारमा प्रश्नचिन्ह उठाउने हो । कसैको शाखुल्य हुन जरुरी छैन ।’
२०६६ सालमा स्थापना भएको दाङ प्रादेशीक राजधानी सरोकार समितिको सदस्य सचिबको रुपमा काम गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ दाङमाथी यो आन्दोलनका क्रममा प्रश्न तेर्सिए । लामो समयदेखि दाङको सम्भावनाको मूल्यांकन गर्दै प्रदेश राजधानीको मुद्धा उठाउँदै आएको महासंघ र अध्यक्ष सविन प्रियासन बन्दसहितको आन्दोलन उत्रिएपछि प्रश्न (विवाद) हरुको सामना समेत गर्नुप¥यो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा प्राय सबै दलहरुले दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणापत्र बनाएका थिए । त्यसमा पनि माओवादीका महरा र शंकर पोख्रेलको केन्द्रिय पहुँचलाई आधार मान्दै जनताहरुले बामगठबन्धनलाई विजयी बनाए । अहिले यिनै नेताहरुको भागमा ठूलो प्रश्न परेको छ ।
शंकर पोख्रेलमाथि झन् नैतिक प्रश्नले तताएको छ । प्रदेश प्रमुखसँग राजधानी साटेको चोटिलो लाञ्छना लागेका पोख्रेलले गणतन्त्र दैनिकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा पौष १६ गते प्रष्ट पारेका थिए । ‘प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम सरकारले गर्ने हो जुन नेपाली काँग्रेसको सरकार छ ।’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री बनाउने काम बाम गठबन्धनको हो ।’
सरकारको निर्णयपछि महरा र पोख्रेल दाङमा आएर आन्दोलनमा सहभागी भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै दंगालीहरुको अपेक्षा छ । ‘दाङ आएर मात्रै यो विषयले टुंगो पाउँदैन । मैले पहिलो चरणको वक्तव्य दिइसकेको छु, काठमाडौँमै कुटनीतिक लबिङ भैरहेको छ’, महराले बताए । अहिले नेपाली काँग्रेसका नेताहरु समेत आन्दोलनमा निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन् । झण्डासहित काँग्रेस दाङले आफ्नै नेतृत्वको निर्णयमाथि बिरोध गरिरहेछ ।
व्यवसायीहरु सटर झारेर आन्दोलनमा छन् । ‘किस्ता तिर्ने पैसा छैन । तर, आन्दोलनमा छौं’, व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘दाङमाथि भएको अन्यायको विरोध यतिबेला गरिएन भने त्यो कहिल्यै गर्न सकिदैन ।’ प्रत्येक दङालीहरुको मनमा दाङमाथीको अन्याय थाहा छ । र केन्द्रिय तहमा पुगेका नेताहरुले केहि गर्न सकेनन् भन्ने असन्तुष्टि पनि छ ।
रिक्सा चलेका छैनन्, टेप्पो र बाइकसम्म चल्न नसकेपछि दाङका शहरहरु शनिबार मनाइरहे जस्ता देखिन्छन् । बजारमा मानिस छैनन् । मानिस नभएपछि फुटपाथको व्यापार पनि छैन । तर, पनि नमिठो साइरन बजाउँदै हुँइकिन्छ एम्बुलेन्स ।